ပေါင်မုန့်ကို ပေါင်မုန့်လို့ မမြင်ကြသူတွေကို ပြန်တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ သွန်းဆက် - APANNPYAY
Home / သရုပ်ဆောင်များ / ပေါင်မုန့်ကို ပေါင်မုန့်လို့ မမြင်ကြသူတွေကို ပြန်တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ သွန်းဆက်
ပေါင်မုန့်ကို ပေါင်မုန့်လို့ မမြင်ကြသူတွေကို ပြန်တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ သွန်းဆက်
Apann Pyay 5:56 PM သရုပ်ဆောင်များ Edit
သရုပ်ဆောင် သွန်းဆက်ကတော့ ဇူလိုင်(၁၂)ရက်နေ့ ညက ပေါင်မုန့်ချောင်းကို စားနေတဲ့ ပုံတွေကို သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ် ပေါ်မှာ တင်လိုက်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံတင်ရင်းနဲ့ "Big Bread & Me မှတ်ချက် - လာမမန့်ချင်နေပါရှင်။ ရိုင်းစိုင်းစွာတော့ လာမမန့်ရ ...လာမန့်လျှင် ဘလော့မည်" ဆိုတဲ့ စာသားပါ တစ်ခါတည်း ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်လည်း အဲ့ဒီပုံတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်မှုတွေ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီဝေဖန်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သွန်းဆက်က တော့ ယခုလို ပြန်လည်တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။
"အော် ဒုက္ခပါပဲနော်။ ပေါင်မုန့်ကို ပေါင်မုန့်လို မမြင်ပဲ ဘာတွေမြင်ကြလဲတော့မသိပါဖူး။ ကိုယ်တွေ ဖေ့စ်ဘွတ်တင်တယ် ဆိုတာလဲ ဒီလို အသားညှပ်ပေါင်မုန့်အကြီးကြီးကို အမြဲ မတွေ့ဖူးလို့ တင်ထားတာပါ နိုင်ငံခြားမှာပဲ ဒီလိုပေါင်မုန့်တွေ အမြဲတွေ့ ရတာ ဒီမှာဆိုသိပ်မတွေ့ရလို့ တင်တာပါ။
ရိုင်းစေချင်တဲ့ဆန္ဒလဲမရှိပါဖူးရှင် ပုံတင်တော့လဲ အဆဲခံရမှာဆိုးလို့ဘလော့မယ်ရေးထားတာပါ.။ ဒီမှာက cele တွေဘာ တင်တင်လေ မိန်းကလေးတွေ ဆိုတာလဲ မသိကြဖူး နှမချင်းမစာမနာဆဲကြလွန်းလို့ပါ။ မြန်မာဝတ်စုံတွေနဲ့ပုံတင်လဲဆဲကြ...cute ပုံတင်လဲဆဲကြ..sexy ပုံတင်လဲဆဲကြနဲ့. ဘာတင်တင်အဆဲခံနေရတာပဲလေ။ ကိုယ်ချင်းစာပြီး တွေးပေးရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲရှင် all peace နော်" ဆိုပြီး ရေးသားထားပါတယ်။
သွန်းဆက်ရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ ယခုလို ဝေဖန်စာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ထဲမထားဖို့ကိုလည်း ပြောပြထား ပါသေးတယ်။ သွန်းဆက်ကတော့ လက်ရှိမှာ ကျူးကျူးကျော်ကျော် ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးနေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
သရုပျဆောငျ သှနျးဆကျကတော့ ဇူလိုငျ(၁၂)ရကျနေ့ ညက ပေါငျမုနျ့ခြောငျးကို စားနတေဲ့ ပုံတှကေို သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျ ပျေါမှာ တငျလိုကျပါတယျ။
ဓာတျပုံတငျရငျးနဲ့ "Big Bread & Me မှတျခကျြ - လာမမနျ့ခငျြနပေါရှငျ။ ရိုငျးစိုငျးစှာတော့ လာမမနျ့ရ ...လာမနျ့လြှငျ ဘလော့မညျ" ဆိုတဲ့ စာသားပါ တဈခါတညျး ရေးသားထားတာ ဖွဈပါတယျ။ဒါပမေယျ့လညျး အဲ့ဒီပုံတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး ဝဖေနျမှုတှေ ရှိလာခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီဝဖေနျမှုတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး သှနျးဆကျက တော့ ယခုလို ပွနျလညျတုံ့ပွနျလိုကျပါတယျ။
"အျော ဒုက်ခပါပဲနျော။ ပေါငျမုနျ့ကို ပေါငျမုနျ့လို မမွငျပဲ ဘာတှမွေငျကွလဲတော့မသိပါဖူး။ ကိုယျတှေ ဖစျေ့ဘှတျတငျတယျ ဆိုတာလဲ ဒီလို အသားညှပျပေါငျမုနျ့အကွီးကွီးကို အမွဲ မတှဖေူ့းလို့ တငျထားတာပါ နိုငျငံခွားမှာပဲ ဒီလိုပေါငျမုနျ့တှေ အမွဲတှေ့ ရတာ ဒီမှာဆိုသိပျမတှရေ့လို့ တငျတာပါ။
ရိုငျးစခေငျြတဲ့ဆန်ဒလဲမရှိပါဖူးရှငျ ပုံတငျတော့လဲ အဆဲခံရမှာဆိုးလို့ဘလော့မယျရေးထားတာပါ.။ ဒီမှာက cele တှဘော တငျတငျလေ မိနျးကလေးတှေ ဆိုတာလဲ မသိကွဖူး နှမခငျြးမစာမနာဆဲကွလှနျးလို့ပါ။ မွနျမာဝတျစုံတှနေဲ့ပုံတငျလဲဆဲကွ...cute ပုံတငျလဲဆဲကွ..sexy ပုံတငျလဲဆဲကွနဲ့. ဘာတငျတငျအဆဲခံနရေတာပဲလေ။ ကိုယျခငျြးစာပွီး တှေးပေးရငျ သိပျကောငျးမှာပဲရှငျ all peace နျော" ဆိုပွီး ရေးသားထားပါတယျ။
သှနျးဆကျရဲ့ ပရိသတျတှကေတော့ ယခုလို ဝဖေနျစာတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး စိတျထဲမထားဖို့ကိုလညျး ပွောပွထား ပါသေးတယျ။ သှနျးဆကျကတော့ လကျရှိမှာ ကြူးကြူးကြျောကြျော ဇာတျကား ရိုကျကူးနတေယျလို့လညျး သိရပါတယျ။